စံလင်းထွန်း: အင်တာနက်နှင့် ဘလော့ဂ်အကြောင်း တစေ့တစောင်း (ထွေရာလေးပါး)
ကမောက်ကမဘဝမှာ ကောက်ရမိခဲ့တဲ့ အတွေးအစအနအချို့နှင့်အတူ ... ရင်မှနားလည်ခဲ့သော အသိတရားများအား ကလောင်သွားများဖြင့် စိတ်တိုင်းကျ စီခြယ်ထုံမွှမ်းလိုက်သည့်အခါ ...
အင်တာနက်နှင့် ဘလော့ဂ်အကြောင်း တစေ့တစောင်း (ထွေရာလေးပါး)
ဘလော့ဂ်ရေးရင်း နည်းပညာနဲ့ ပါတ်သတ်လို့ ထွေရာလေးပါးအကြောင်းပြောချင်ပါတယ်။ အရင်ကတည်းက အွန်လိုင်းရောက်တိုင်း ဘလော့ဂ်တွေ အစုံဖတ်ဖြစ်နေခဲ့တာ ကြာတော့ကြာနေပါပြီ။ ကျွန်တော် အများဆုံးဝင်ဖတ်ဖြစ်တာကတော့ ညီလင်းဆက်ရဲ့ ဘလော့ဂ်ပါပဲ။ နောက်တော့မှ တဖြည်းဖြည်းချင်း အခြားဘလော့ဂ်တချို့ကို သိလာတယ်။ ဘလော့ဂ်တွေဖတ်ရင်းကနေ အတွေးအမြင်၊ နည်းပညာဗဟုသုတတွေ တိုးပွားလာတာကိုတော့ ငြင်းပယ်လို့မရပါဘူး။
အဲဒီအခါမှာ ကျွန်တော့်ခေါင်းထဲ တစ်ခုကို သွားတွေးမိတယ်။ သူတို့တွေရေးနေတဲ့ ဘလော့ဂ်တွေဟာ နည်းပညာ၊ ရသ၊ သုတစာပေ၊ သတင်းစသဖြင့် အကြောင်းအရာတွေက စုံလည်းစုံပါတယ်။ အင်တာနက်မှာ ဘလော့ဂ်ဖတ်တဲ့ သူတွေအတွက် အတော်လေးကို အကျိုးရှိကြတာပဲ။ ဒီဘလော့ဂ်တွေ ရေးတဲ့ ကာယကံရှင်သူတို့တွေအတွက် အခကြေးငွေ တစ်ပြားတစ်ချပ်မှ မရတဲ့အပြင် မိမိကိုယ်ပိုင်အချိန်၊ ကိုယ်ပိုင်ငွေကို ရင်းနှီးစိုက်ထုတ်ပြီး အင်တာနက်ပေါ်မှာ စာရေးရင်း ပရဟိတအကျိုးပြု လုပ်ငန်းတွေ လုပ်နေကြတယ်ဆိုတာ သတိပြု ဆင်ခြင်မိတယ်။ ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာ လေးစားအားကျ အတုယူချင်စိတ်တွေ အလိုလိုဖြစ်ပေါ်လာတယ်။
သူတို့လိုပဲ ကျွန်တော့်ရင်ထဲက စေတနာတွေ၊ ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးမှုအနုပညာတွေကို ဘလော့ဂ်ပေါ်က တဆင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးသိအောင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြန့်ခင်းပြချင်လာတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်မှာ လုံလောက်တဲ့ နည်းပညာဗဟုသုတတွေ၊ ကွန်ပျူတာ အတတ်ပညာတွေ တတ်မြောက်မှု မရှိသေးတော့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ဘလော့ဂ်ရေးနိုင်တဲ့ အဆင့်ရောက်အောင် အချိန်ကုန်ခံ၊ ငွေကုန်ခံ၊ အိပ်ရေးပျက်ခံပြီး လေ့လာသင်ယူပြီးကာမှ ဘလော့ဂ်တစ်ခုကို ခက်ခက်ခဲခဲတည်ဆောက်ခဲ့ရပါတယ်။ (ဒီအခြေအနေထိရောက်လာအောင် အဖက်ဖက်က ကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့တဲ့သူတွေဟာလည်း အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ရေးနေတဲ့ မမြင်ရတဲ့ ဆရာတချို့ကြောင့်ပေါ့။ သူတို့ရေးတဲ့ စာတွေကုို ဖတ်မှတ်လေ့လာသင်ယူပြီး ဒီအခြေအနေကို တက်လှမ်းခဲ့ရတာပါ။ )
အဲဒီလို အင်တာနက်မှာ နည်းပညာတွေအကြောင်း လေ့လာလိုက်စားရင်း အင်တာနက်ကို စွဲမှန်းမသိစွဲလန်းလာတယ်။ ဒီနေရာမှာ အင်တာနက်စွဲလန်းပုံခြင်း မတူညီကြတာကို ထည့်ရေးပါရစေ။ အများလည်း သိပြီးဖြစ်လောက်မှာပါ။ မြန်မာတွေက ချက်တင်လောက်နဲ့ ဂျီမေလ်းသုံးတတ်လောက်ရုံနဲ့ အင်တာနက်သုံးတတ်ပြီလို့ အထင်မှားနေကြတာဗျ။ တချို့ဆို အပြင်မှာ ကျွန်တော်မြင်ဘူးတယ်။ အင်တာနက်ဆိုင်မသွားရ မနေနိုင်အောင်ဖြစ်နေတဲ့ လူငယ်လူရွယ်လေးတွေကို အပြင်မှာ ခဏခဏတွေ့ဘူးတယ်။ အိမ်က မိဘတွေကတော့ ကိုယ့်သားသမီး အင်တာနက်ဆိုင်သွားတာကို ဂုဏ်ယူလို့ မဆုံးဘူး။ သူတို့ရည်ရွယ်ချက်က သားသမီးတွေကို ခေတ်ပညာတတ်မြောက်စေချင်ကိုး။
တစ်ကယ်တော့ ဒီနေ့ခေတ်လူငယ်အများစုဟာ အင်တာနက်မှာ ချက်တင်နဲ့တင်ပဲ အချိန်ဖြုန်း၊ ငွေဖြုန်းလုပ်နေကြတာ မိဘတွေသိရင် ရင်ကျိုးရှာမှာပဲ။ ဒါပေမယ့် တချို့လူငယ်တွေကြတော့ အင်တာနက်ဆိုင်မှာ ကိုယ့်အတွက် အကျိုးရှိစေမယ့် ဝဘ်ဆိုဒ်တွေကို ရှာဖွေပြီး ဗဟုသုတ၊ ပညာရှာမှီးကြတယ်။ သူတို့ဘဝတက်လမ်းကို အင်တာနက်ကတဆင့် ရှာဖွေကြတယ်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ အင်တာနက်ဆိုင်မှာ ပိုက်ဆံကုန်ခံထိုင်တဲ့သူချင်း အတူတူ အတွေးအခေါ်၊ ဗဟုသုတ၊ အသိပညာချင်းက မိုးနဲ့မြေလိုကွာခြားသွားတယ်။
ဘလော့ဂ်တွေလည်ရင်း စိတ်ဝင်စားသတိပြုမိတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတစ်ခု ကြုံတုန်းအမှတ်ရလို့ ထည့်ပြောချင်ပါတယ်။ ဘလော့ဂ်ဂါတွေ အချင်းချင်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် တဂ်ကြတဲ့အခါ ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးနဲ့ပေါ့။ ကျွန်တော်ဖတ်ဖြစ်တဲ့ ဘလော့ဂ်တစ်ခုက တဂ်ခေါင်းစဉ်မှာ ချက်တာဘဝမှ ဘလော်ဂါဘဝသို့ လို့ ဆိုထားတယ်။ ဒီနှစ်ခုကတော့ အဆင့်အတန်းချင်း မိုးနဲ့မြေလိုကွာခြားတယ်လို့ ပြောရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် အင်တာနက်သုံးတဲ့သူအားလုံးကတော့ ချက်တင်နဲ့မကင်းနိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်လည်း ဂျီတော့မှာ ချက်တင်ထိုင်တဲ့ ဘဝကနေ တဖြည်းဖြည်း ဘလောဂ့်ရေးတဲ့အနေအထားထိ အသွင်ကူးပြောင်းလာခဲ့တာပါ။
ဘလော့ဂ်ဂါ တော်တော်များများလည်း ဒီလိုပဲ ဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဘလော့ဂ်ဂါတွေကတော့ သာမာန်အင်တာနက်သုံးသူတွေထက် ပိုပြီးအမြင်ကျယ်တယ်။ အတွေးအခေါ်ပိုမြင့်တယ်လို့ ယူဆမိတယ်။ (Blogger.com မှာမရေးဘဲ တခြားသောဝဘ်ဆိုဒ်မှ ဘလော့ဂ်ရေးသူများအပါအဝင် ဆိုလိုပါသည်။) ဒါဆို ဘလော့ဂ်ဂါမဟုတ်တဲ့သူတွေကရော အမြင်မကျယ် အတွေးအခေါ်မရှိတော့ဘူးလားလို့ ဇောတကတက် မေးခွန်းထုတ်စရာရှိလာပါတယ်။ မှန်ပါတယ်။ လူတိုင်း ဘလော့ဂ်ဂါတော့ ဘယ်ဟုတ်နိုင်ပါ့မလဲ။ ဘလော့ဂ်မရေးပေမယ့် တခြားသော လိုင်းတွေမှာ ဥပမာ- ဝဘ်ဒီဇိုင်းနာတစ်ယောက်ပေါ့၊ အင်တာနက်မှာတော့ အများကြီးကျယ်ပြန့်ပါတယ်။ သူတို့တွေကလည်း အမြင်ရှိသူ၊ အမြင်ကျယ်သူတွေပါပဲ။
အခုဆိုရင် အင်တာနက်ပေါ်မှာတင်ပဲ ကိုယ်ပိုင်ဒိုမိန်းနဲ့ ဝဘ်ဆိုဒ်ကလေးတွေ လွှင့်တင်ပြီး စီးပွားရေးကအစ တခြားသော ပညာရေး၊ လူမှုရေးအစရှိသဖြင့် ဥာဏ်ရှိသလို ချဲ့ထွင်အသုံးပြုနေကြပြီ။ ဥပမာ စီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုပါတော့။ မိမိက ရန်ကုန်မှာ အလှကုန်၊ အဝတ်အထည်ပစ္စည်း၊ မျက်နှာပေါင်းတင်၊ အလှပြင်ဆိုင်တွေပါ တွဲဖွင့်ထားတဲ့ ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖွင့်ထားတယ် ဆိုပါစို့။ အင်တာနက်မှာ ဝဘ်ဆိုဒ်လွှင့်တင်ပြီးတော့ ဈေးနှုန်းတွေနဲ့တကွ ဘယ်လိုဝန်ဆောင်တွေလုပ်တဲ့အကြောင်း အသေးစိတ်ရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့အတူ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ကြော်ငြာထည့်သွင်းလို့ ရတာပဲ။ အချိန်မရွေး ဒီကြော်ငြာကို အင်တာနက်အသုံးပြုသူက လာဖတ်လို့ရတယ်။ ဒါကိုက နည်းပညာရဲ့ အားသာချက်တစ်ခုပါ။
ဒီတော့ ကျွန်တော် အဓိကပြောချင်တာက အင်တာနက်ဆိုတာ အလွန်ကျယ်ပြန့်တဲ့ မိုးကောင်းကင် စာကြည့်တိုက်ကြီးတစ်ခုလိုပါပဲ။ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကိုယ်သွားချင်တဲ့နေရာကို ချက်ခြင်းအရောက်သွားနိုင်တယ်။ နိုင်ငံတကာ ပညာရေးအကြောင်း သိချင်သလား။ ချက်ချင်း ဂူဂဲလ် ဆာ့(ခ်ျ)အင်ဂျင်မှာ ရိုက်ရှာပြီး သွားကြည့်လို့ရတယ်။ သတင်းတွေဖတ်ချင်သလား တစ်နေကုန်ထိုင်ဖတ်လို့တောင် မကုန်ဘူး။ ဒါတွေက နည်းပညာရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မြင်ကွင်းတွေပါပဲ။
ဒီလို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ နည်းပညာခေတ်မှာ အင်တာနက်ပေါ်က ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ဂ်၊ ကိုယ်ပိုင်ဝဘ်စာမျက်နှာတွေကလည်း ခေတ်တစ်ခုရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ပံ့ပိုးပေးမယ့် အရင်းအမြစ်တွေပဲ။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာရှိကြတဲ့ အတတ်ပညာရှင်ပေါင်း မြောက်များစွာဟာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုကြီးထဲမှာ ပေါင်းစည်းမိကြရင်း သူမသိတာကိုယ့်မေး၊ ကိုယ်မသိတာ သူ့မေးပြီး အတွေးအခေါ်တွေ၊ အသိပညာတွေ၊ နည်းပညာတွေကို နှီးနှောဖလှယ်ကြ၊ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြနဲ့ အလွန်အင်မတန်မှ အားရဖွယ်ရာကောင်းလှပါတယ်။
ဒီလိုအခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါမျိုးမှာ ဘလော့ဂ်တွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကလည်း အရေးပါအရာရောက်လာပါပြီ။ စာနယ်ဇင်းသမားတချို့ရဲ့ ဝေဖန်မှုတွေအရ ဘလော့ဂ်တွေဟာ အင်တာနက်ပေါ်မှာ မီဒီယာသစ်လို့တောင် တင်စားခေါ်ဝေါ်လာကြတဲ့အထိပါပဲ။ ဘလော့ဂ်တွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကတော့ တဖြည်းဖြည်းပိုပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာတော့ အမှန်ပါပဲ။ နောင်လာမယ့် အနာဂါတ်တစ်ခုမှာ လူတိုင်းလူတိုင်း အင်တာနက်သုံးတတ်ပြီး ကိုယ်ပိုင်ဝဘ်စာမျက်နှာ၊ ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ဂ်တွေသာ ရှိလာကြမယ်ဆိုရင် ....
photo copy from google image.
Posted by စံလင်းထွန်း at 9:00 PM
Labels: ဘလော့ဂ်ဂါ, ဆောင်းပါး
ကိုစံလင်းပြောတာ မှတ်သားစရာပါ ။
ဒီဆောင်းပါးလေးကို ဖတ်သွားပါတယ်။ ကောင်းတယ်ရှင့်။
ဓမ္မသံဝေဂ ကဗျာ (2)
အတွေးအမြင် ဆောင်းပါး (4)
ပျော်ပျော်ပါးပါး ခရီးသွားခြင်း (1)
မေတ္တာဖြင့် တုံ့ပြန်စာ (1)
နှလုံးသားမှ အလိုလို ပြုတ်ကျလာတဲ့ကဗျာ (7)
ချ စ် လို့ရေးတဲ့ က ဗျာ( ၁ ၇ )
Tempat Promosi Onlone Terbaik
..:: မြန်မာလူငယ်အနုပညာရှင်များ ::..
Computerised Music Creation
“ရွှေမြန်မာ မှ ကြိုဆိုလျှက်ပါ”
♫♪♫★ < နေဇော်လင်း > ★ ♫♪♫
နှစ်ချို့ကော်ဖီတစ်ခွက် နဲ့ ငါ့မြို့ပျက်ညတွေ...
နစ်ကီ ဟာလေ ဒေါ်လာ ၁ သန်းကျော် အကြွေးတင်
Turn On Remote Desktop in Windows7and Vista
ဂဘောက်တိဂဘောက်ချာ ကျွန်တော့်စာ (၄)
ဘလောဂ့်မရေးတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်တစ်ယောက် (၃)လတာကာလအတောအတွင်းထဲမှာ အပြောင်းအလဲတွေ အတော်များခဲ့ပါသည်။ ဘဝသံသရာအချိုးအကွေ့ ဝင်္ကမ္ဘာဝဲဂယက်ထဲ တ...
ပီနန် ဘုရားကျောင်းထဲက သပ္ပါယ်စွာတည်ရှိနေတဲ့ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားဆင်းတုတော် ပန်းဆီမီးများကပ်လှူပူဇော်နေချိန် ဘုရားစောင်းတန်ထိပ်နားက အတွင်းသို့ လ...
အဖေသို့တမ်းချင်း ... အဖေ ... ဇရာထောင်းလို့ ခန္ဓာရုပ်ပြောင်းခဲ့ပြီနော် ... ကံကြမ္မာသာ တစ်ချက်စောင်းငဲ့လိုက်ရင် သားတို့ဘဝ အခုလို ပြောင်းလ...
အချစ်ဆိုတာ ...ချစ်နေတာ အ စစ်အမှန် ချစ် ဟန်မဆောင် ဆို တေးဖွဲ့လျက် တာ တမံထက် ချစ် ပန်းပျိုးထောင် နေ လောင်သော်လည်း တာ ရှည်ခိုင်မြဲ ......
လွဲ ... လွဲမှားတဲ့အယူအဆကြောင့် လွဲမှားတဲ့လမ်းပေါ်ရောက်ရ လွဲမှားတဲ့လမ်းတွေဖောက် လွဲမှားတဲ့လမ်းတွေကိုလျှောက် လွဲမှားတဲ့အိမ်မက်တွေကောက်လ...
အမေသို့တမ်းချင်းများ (၁) ...
အမေသို့တမ်းချင်း ... အမေ ... သတိရခြင်းတွေကို စာရွက်ပေါ်မှာချရေးရင်း ရင်ထဲမှာ ဟာတာတာဖြစ်လာတုန်း ဗလာစာမျက်နှာမှာ နောင်တတရားတွေကို ဆင်ခြင...
အမေသို့တမ်းချင်းများ ...(၂) အမေ ... ဟိုတစ်နေ့က စားခဲ့ရတဲ့ ဟမ်ဘာကာ ငယ်ငယ်က အမေဝယ်ကျွေးခဲ့တဲ့ ကြံသကာတွေလောက်မချိုမြိန်ဘူး ...။ အမေ ... ဈေ...
ကြင်နာမဝလို့ မြင်တာခဏ ကြင်နာရသည် ရင်မှာခဏ ဘဝင်မကျပြီ အစဉ်ထာဝရ မြင်ရချင်တာ ကုဋေကုဋာမက သူမမျက်နှာ။ စံလင်းထွန်း photo copy from goog...
ပျိုးမိတဲ့ပန်း အကွေ့အကောက်ဘဝတွေနဲ့ အတွေ့နောက်ကျခဲ့ပေမယ့် ... မနေ့တနေ့ကမှ တွေ့လိုက်ရတဲ့မင်းကို စိတ်ထဲတိတ်တခိုး ကြိတ်ပိုးနေမိတယ် ... မင်...
ကဗျာဆိုတာ... ကဗျာ ကြ ကီးခခွေးအိမ်ကိုပြေး ဗျာ မများစိတ် အေးချမ်းစဉ်အတိတ်က ဆိုရွတ်ခဲ့ရတာလည်း ကဗျာ တာ ဝန်ကိုယ်စီ ကြီးပြင်းလာရာ ဘဝမှာ ...
(c)2009 စံလင်းထွန်း . Blogger Templates created by Deluxe Templates